काबुल विमानस्थलमा कसले किन गरायो धमाकेदार विस्टोफ ? – Pahilo Page
Tuesday September 21, 2021 |
काबुल विमानस्थलमा कसले किन गरायो धमाकेदार विस्टोफ ?
१० भाद्र २०७८, बिहीबार २३:२१ 132 पटक हेरिएको
काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा बिहीबार साँझ दुई वटा विष्फोट भएका छन्। पहिलो विष्फोट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एबी गेट बाहिर भएको थियो भने दोस्रो विस्फोट एबी गेटबाट अलि टाढा रहेको ब्यारोन होटल नजिक भएको थियो।
पहिलो विस्फोटमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। एकै समयमा, दोस्रो विस्फोट भएकाले हताहतीको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ। विस्फोटपछि त्यहाँ गोलीबारी भएको पनि बताइएको छ।
दुबै विस्फोट पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले पुष्टि गरेका छन्। साथै किर्बीले एयरपोर्टमा भएको विस्फोटमा धेरै अमेरिकी मानिसहरुको मृत्यु भएको बताएका छन्।
ब्रिटिश सैनिकहरु एबी गेटमा भेला भएका थिए जहाँ पहिलो विस्फोट भएको थियो। एक अमेरिकी अधिकारीले समाचार एजेन्सी रोयटर्सलाई यो एक आत्मघाती बम विस्फोट भएको बताएका छन्। यसक्रममा त्यहाँ जमिनमा गोली पनि हानिएको खबर आएको थियो।
त्यसको केही समयपछि तालिबान अधिकारीले बिहीबार साँझ भएको विस्फोटमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। मृत्यु हुनेमध्येमा महिला र बालबालिका पनि रहेको बताइएको छ। तालिबान लडाकुहरुसहित धेरै मानिसहरु घाइते भएका छन्।
“हामी पुष्टि गर्न सक्छौं कि एबी गेटमा भएको विस्फोट एक जटिल हमला को परिणाम थियो जसमा धेरै अमेरिकी र अन्य नागरिक मारिएका थिए। एबी गेट। हामी थप जानकारी प्रदान गर्ने प्रयासमा छौं,’ पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले ट्विटरमा लेखेका छन्।
बीबीसी संवाददाता जोनाथन बीलले विमानस्थल बाहिर दुई वटा विष्फोट भएको र दोस्रो विस्फोट पछि गोली चलेको बताए। यी दुबै विस्फोट विमानस्थलको एबी गेट क्षेत्रमा भएको थियो, जहाँ विगत धेरै दिनदेखि अफगान शरणार्थीहरुको ठूलो संख्या बसिरहेको छ।
गेटबाट टाढा जान फ्रान्सेली राजदूतको आग्रह
फ्रान्सेली राजदूत डेभिड मार्टिननले मानिसहरुलाई एयरपोर्टको गेटबाट टाढा जान आग्रह गरेका छन।् त्यहाँ अर्को विस्फोटको खतरा रहेको भन्दै उनले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
“हाम्रा अफगान साथीहरुलाई – यदि तपाइँ एयरपोर्ट गेटको नजिक हुनुहुन्छ भने तुरुन्तै टाढा जानुहोस् र केहि पछाडि लुक्नुहोस्, अर्को विस्फोटको सम्भावना छ,’ उनले ट्वीट गरेका छन्।
यससँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले अफगानिस्तानको स्थिति धेरै खराब भएको बताएका छन्। उनले यस अवस्थाको ख्याल राख्नपर्ने बताएका छन्। त्यसो नभएमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चेतावनी उनले दिए।
फ्रान्सेली राजदूतले विष्फोटमा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनले कुनै फ्रान्सेली सैनिक, पुलिस अधिकारी वा कूटनीतिज्ञ एबी गेटमा तैनाथ नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
यसको केही बेर पछि दोस्रो विस्फोटको खबर पनि आयो। पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले यसको पुष्टि गर्दै ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘हामी यो पनि पुष्टि गर्न सक्छौं कि अर्को विस्फोट ब्यारोन होटलमा वा त्यसको नजिकै भएको हो। एबी गेटबाट छोटो पैदल दूरीमा। हामी थप जानकारी को लागी तत्पर छौ।’
विस्फोट कसले र किन गरायो भन्ने थप जानकारी आएको छैन। विमानस्थलमा रहेको मानिसहरुमा त्रास बढेको छ। यसअघि बेलायत, अमेरिकालगायतले विमानस्थलमा खतरा रहेको र आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। इस्लामिक स्टेटले ठूलो आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान उनीहरुको थियो।
प्रेमी र बहिनीको सहयोगमा
रुसी निर्वाचनमा धाँधली, सत्ताधारी
विश्वमा आजः अमेरिकाद्वारा आतंकवादविरुद्धको
उत्तर कोरियाले घातक आणविक
अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा छात्रालाई विद्यालय
अफगानिस्तानको नान्गरहार प्रान्तमा तीनवटा
काबुलमा ड्रोन आक्रमण :
अफगानिस्तानमा पुरुष विद्यालय खुले,
फ्रान्सले अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट
संखुवासभा हत्याः मृतक रञ्जनाको मोबाइलमा के भेटियो ?
संखुवासभा हत्याकाण्ड: अर्का एक व्यक्ति पनि पक्राउ
पति राज कुन्द्राको साथ छाडिन् शिल्पाले
यी पाँच जना मिलेर यसरी गरेका थिए छ जनाको विभत्स हत्या
नायिका करिश्मा मानन्धर र केपी ओलीबीचको टेलिफोन कुराकानी विवादमा
ओलीको मुद्दाको सुनुवाइ आज सकिँदै
सिरहामा श्रीमान्को हत्या आरोपमा श्रमती पक्राउ
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने एमाले नेता, कार्यकर्ता कारवाहीमा पर्ने
सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय तस्कर समूहको आक्रमण, ३ प्रहरी घाइते
आज ७ जिल्लामा कांग्रेसको वडा अधिवेशन
प्रेमी र बहिनीको सहयोगमा आफ्नै श्रीमान् सिध्याइन्, शवलाई टुक्राटुक्रा पारेर केमिकल हालिन्
आज तीनवटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
आजदेखि सोह्र श्राद्ध शुरु, अरुको घरमा किन गर्नुहुँदैन श्राद्ध ?
बुटवलका मेयरलाई मुक्का हान्ने विद्यार्थी नेता पक्राउ